Hubi hababka nadiifinta iyo dayactirka iyo tallaabooyinka sanduuqa hawo qaboojiyaha-Warshadaha Warshadaha-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Hubi hababka nadiifinta iyo dayactirka iyo tillaabooyinka miiraha sanduuqa qaboojiyaha
Waqtiga: 2021-07-14 Hits: 12
Nolosheena waxaa kujira qalab badan oo lagu sifeeyo, marka maanta waxaan soo bandhigi doonaa nooc cusub oo ah qalabka shaandhada, taas oo ah, shaandhadayada qaboojiyaha. Waxaan rajeyneynaa in hordhacayaga, qof kastaa uu baran karo aqoon badan oo ku saabsan miirayaasha sanduuqa qaboojiyaha, kan ugu muhiimsan Ma yahay dayactirka saxda ah, wuxuu kordhin karaa adeegsiga qalabka
Nolosha, ciyaar qiimaheeda weyn.
Sida loo nadiifiyo miiraha sanduuqa qaboojiyaha: Haddii miiraha sanduuqa qaboojiyaha uu aad u wasakh badan yahay, ku nadiifi hoosta ilaa sare hawo cadaadis leh. Kahor nadiifinta shaandhada sanduuqa qaboojiyaha, waxaa fiican inaad boodhka ka saarto dusha sare, ama waad ku nadiifin kartaa hal talaabo. Guud ahaan, waxaa jiri doona warshado badan aagga miiraha sanduuqa qaboojiyaha, mararka qaarkoodna leh
Qeybaha, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho burush. Qoriga hawada ku hay oo shaandhee 5 sentimitir (sentimitir) kuna afuuf 50kPa (kilopascals) ilaa 2 daqiiqo. Markaad nadiifinaysid miiraha qaboojiyaha, fiiro gaar ah u sifeeya gudaha. Waxaa ugufiican in lagu nadiifiyo saabuunta dharka si looga fogaado wasakhda haraaga ah. Ka dib nadiifinta, miiraha waa in lagu qalajiyaa qorraxda oo la qalajiyaa. Si toos ah ha u dhigin qalabka shaandhada ee sanduuqa qaboojiyaha si looga fogaado khasaaro aan loo baahnayn oo soo gaara qalabka
Sifeeyaha sanduuqa qaboojiyaha ayaa la oran karaa waa qeybta ugu muhiimsan ee qaboojiyaha. Waxay badanaa nadiifisaa boodhka, manka, geedaha iyo dhibaatooyinka kale ee hawada, waxayna badanaa u keentaa wasakheynta gudaha nidaamka hawo-qaboojinta. Nidaamka dayactirka ee nidaamka qaboojiyaha-qaboojiyaha, waa inaan si fiican u nadiifinnaa shaandhada qaboojiyaha, waxaad isticmaali kartaa marinka hawada
nadiif ah. Haddii miiraha sanduuqa qaboojiyaha aan si hufan loo nadiifin karin, milkiilaha ayaa beddeli kara shaandhada sanduuqa qaboojiyaha. Dayactirka shaandhada sanduuqa qaboojiyaha:
1. Hubi oo beddel miiraha sanduuqa qaboojiyaha si waafaqsan qorshaha dayactirka. Goobaha carrada ama culus ee taraafikada, waxay u baahan karaan in horay loo beddelo
2. Haddii qulqulka hawada ee hawo mareenku si weyn u daciifo, miiraha ayaa xannibi kara. Hubi shaandhada oo beddel haddii loo baahdo
3. Si looga hortago waxyeellada nidaamka, miiraa baa la rakibay.
4. Markaad isticmaaleyso nidaamka qaboojiyaha, haddii uusan jirin shaandhada sanduuqa qaboojiyaha, nidaamka waa dhaawici karaa.
5. Miiraha ha ku nadiifin biyo.
6. Marka la nadiifinayo ama la beddelayo miiraha qaboojiyaha, nidaamka qaboojiyaha waa in marka hore la demiyaa.
Sifeeyaha sanduuqa qaboojiyaha ayaa miiraha hawada ka soo galaya qolka dibedda si loo hagaajiyo nadaafadda hawada. Qalabka guud ee shaandhada ah waxaa loola jeedaa walxaha, manka, bakteeriyada, gaaska qashinka warshadaha, boodhka iyo waxyaalaha kale ee wasakhda ah ee ku jira hawada soo galaya nidaamka qaboojinta, burburinta nidaamka qaboojinta, ilaalinta caafimaadka dadka gaariga, iyo ka hortagga dhalooyinka atomization
Aqoonta ku habboon ee kor ku xusan ee qof walba loo adeegsan karo tixraac ahaan
HOREKala soocida miirayaasha hawada ururiya iyo sida loo doorto miirayaasha hawada boodhka
NEXTFalanqeyn ku saabsan shaqooyinka iyo faa'iidooyinka arjiga ee miirayaasha la dhaqi karo